ijeli Izinwele ingenye amathuluzi ethandwa kakhulu eyenzelwe emakhiyubhi. Kunezinhlobo eziningi kule mikhiqizo: gel eqinile ukubambelela - izinwele is ethe njo futhi ongaphakeme - ke unikeza rastrepannosti umbono. On ukudayiswa futhi si zezinwele eziyinkimbinkimbi ezifana nalezo ezenza abantu zomdabu saze-Afrika. Ukuze abalandeli into imigodi yokuqala emakethe yesimanje inikeza esebenzisa sibeke izinwele gel anemibala.
Njengomthetho, isho ukuthini idatha zihlanganisa polymers cationic. Siyabonga icala omuhle, zaboshwa kuya omubi icala amino acid elise phezu kwama-molecule yi-keratin zazo izinwele ngokwazo. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kungenzeka ukudala ngokuphelele kwanoma yisiphi isitayela.
Kwezinye izinhlobo gel Ukwakheka kuhlanganisa esincane utshwala. Ivame ukuba nomphumela omiswe ku isakhiwo izinwele, kodwa futhi esikhumbeni, nakho kungaholela dandruff. Ngenxa yalesi sizathu, ochwepheshe abaningi batusa ukusebenzisa ngokudala zezinwele ukuthi awanalo utshwala. Naphezu ukwakheka, izinwele gel kungcono hhayi ukusebenzisa kaningi kakhulu. Unekhono ufuna ukukwenza buthaka izinwele, abenze ziyaqothuka futhi kanzima, kodwa ngemva kwesikhashana kukhona ithuba ezokwenza beyeka babuyeka ngokuphelele.
Gel ukuze imikhiqizo izinwele isitayela okumele asetshenziswe ukumanzisa izinwele, ungakwazi ngokushesha emva ukuwasha, ungakwazi kancane moisten ngaphambi kokufaka isicelo ngqo. Inani elincane imali ithathwe ezandleni zakhe, wagcoba phakathi kwezihlahla zikakhukhunathi. Sebenzisa kudingekile, kusukela endaweni umqhele, zabiwa ngokulinganayo futhi ngokushesha yonke phezu kwekhanda. Khona-ke ungakwazi isitayela izinwele zakho izinwele, okuhloswe ngalo, uma lokhu kudingekile ukuze ome dryer izinwele. Leli phuzu lokugcina kuyoba kakhulu ukuthuthukisa nenkanuko edlulele, kususa akhanye, okuyinto sici ijeli, futhi izinwele uyobheka lemvelo. Kulabo unesifiso kancane ukunciphisa umphumela leli thuluzi, ngaphambi kokuba singasebenza izinwele ekhethekile ikhefu-e conditioner.
Lapho isetshenziswa inqwaba abamele izinwele zingavela isici enamathela omhlophe, njengoba lesi simanga kungenzeka ngenxa ukusebenzisa izinga kusho nenkanuko edlulele ongaphakeme noma enamandla kakhulu.
Kukhona esinye isici isici - uma une oily izinwele isakhiwo noma uma azikho izinhlelo ukugeza izinwele gel ngosuku olulandelayo - ke akudingekile ukuba wasibeka phezu izimpande. Kusho ivame ukuba iphazamise evamile-mpilo saturation we follicle izinwele, izindlala sebaceous clog izimbobo, futhi ngoba abazi ukusebenza kahle.
It is ibuye Kunconywa hhayi ukusebenzisa ijeli izinwele ukulungisa ngaphezu kokudingekile. Kukhona kungenzeka ukuthi umbala esikhundleni zezinwele kwakheka into lifaniswa nesigqoko sokuvikela ikhanda. Lokhu "isakhiwo" hhayi kuphela ubukeka ezingezona ezemvelo, kodwa futhi kubangela umonakalo esindayo kuze izinwele.
Imigodi zezinwele engavamile - lokho akubona bonke, izinwele gel kuzosiza ukudala okunzima kakhulu futhi izinwele, isibonelo, umsila bushelelezi, efanelekayo umsebenzi wasehhovisi. Lokhu kudinga izinwele kahle ayesebenza, sisebenzise ijeli kancane kuwo futhi ukuhlangana Ponytail. Umphumela walokhu uyoba bushelelezi, sengathi iphucuziwe kwekhanda. Futhi lokhu akunjalo kuphela lapho le "prilizannosti" ubukeka nice kakhulu.
Lokhu kusho i-ukustaka ukhona futhi nge umphumela ezimanzi izinwele, ikwazi ukwenza kubo ecwebezelayo ngaphezulu. Leli thuluzi lisetshenziswa ku izinwele permed noma abacaphuni.
Kufinyeta bonke ngenhla, singaphetha ngokuthi ijeli kufanelekile kokubili besifazane kanye zezinwele zabesilisa. Kuvikela ngokumelene ukulahlekelwa ifomu, kwenza isakhiwo izinwele nokunwebeka. Ngalo ungenza, izinwele okuphuma phambili noma bushelelezi hhayi kuphela, kodwa ngokuvamile ukubeka izinwele thwi.
Miracle imoto for izinwele ezinemibala "Estel"
Ukwelashwa futhi izimpawu izilonda esiswini kanye 12 isilonda duodenal